DHAGEYSO:Aadan Barre oo mar kale ku baaqay in deegaanka Ijara la kala qaybiyo | Star FM
Home Wararka Kenya DHAGEYSO:Aadan Barre oo mar kale ku baaqay in deegaanka Ijara la kala...
DHAGEYSO:Aadan Barre oo mar kale ku baaqay in deegaanka Ijara la kala qaybiyo
Xildhibaanka laga soo doortay deegaanka Garissa Township Aadan Barre Ducaale ayaa mar kale maamulka talada wadanka haya ee Jubilee iyo guddiga dib u heshiisiinta iyo mideynta shacabka ee BBI ugu baaqay inay ka shaqeyaan sidii Ijara deegaan baarlamaneed kale loogu kordhin lahaa.
Waxaa uu carrabka ku adkeeyay in tani ay ahayd rajadii Alle ha u naxariistee senatarkii Garissa Maxamad Yuusuf Xaaji oo Isniintii hore geeriyooday.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in dadweynaha ku nool Ijara iyo si guud ismaamulka Garissa ay jecel yihiin in dowladdu ay soo jeedintan tixgeliso si loo xusuusto waxqabadkii senatarka sanado badan wadanka u soo adeegayay.
Ducaale ayaa hoosta ka xarriiqay in soo jeedintan uu u bandhigay madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta iyo ra’iisul wasaarihii hore ee dalka Raila Odinga welina ay dadaalkan sii wadi doonaan iyada oo madaxda gobolka ay iska kaashanayaan
Hoggaamiyihii hore ee aqlabiyadda baarlamaanka dalka ayaa dhanka kale faahfaahiyay waxyaabaha laga doonayo shacabka iyo qoyska uu ka baxay senatarkii Garissa Maxamad Yuusuf Xaaji.
Wiilka uu dhalay senatarkii Garissa ahna agaasimaha waaxda dacwad soo oogidda dalka Mr. Nuurdiin Xaaji iyo barasaabka dowlad deegaankaas Cali Bunow Qorane ayaa labaduba bulshada ka codsaday in la cafiyo Alle ha u naxariistee guddoomiyihii geeddisocodka BBI
Barasaabkii hore ee ismaamulka Garissa Nathiif Jaamac Aadan ayaa dhankiisa ku taliyay in la qoro taariikhdii Maxamad Yuusuf Xaaji.
Previous articleDHAGEYSO:Maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda caafimaadka oo shaqaalaha isbitaalka Martiini u mahadceliyay
Next articleDHAGEYSO:Dowladda Soomaaliya oo ka jawaabtay hadal ka soo yeeray Imaaraatka Carabta